Kugara neInvestment yeCyprus neGold Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muCyprus ye:
● Kugara nekudyara muCyprus
● Ugari nekudyara kubva kuCyprus
● Visa yegoridhe muCyprus
● Pasipoti yechipiri kubva kuCyprus
● Kugara nekudyara kuCyprus nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muCyprus uye Magweta e Kugara neInvestment muCyprus uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muCyprus zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nenzvimbo dzeInvestment vamiririri veCyprus vanopa mabasa ekugara nekudyara muKupro, Kugara nehurongwa hwekudyara muKupro, Kugara nehurongwa hwekudyara muCyprus, wechipiri Kugara nekudyara muCyprus, huviri Residency nekudyara muCyprus, ugari hwemo nekugara nekudyara muCyprus , Kugara zvechigarire nekudyara muCyprus, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muCyprus, Kugara nehurongwa hwekudyara muCyprus, Kugara nehurongwa hwekudyara muCyprus, Ugari nekudyara muCyprus, Ugari nemapurogiramu ekudyara muCyprus, Citizenship nehurongwa hwekudyara muCyprus, wechipiri Ugari nekudyara muKupro, hunyanzvi hwehukama nekudyara muKupro, kugara uye ugari nekudyara muKupro, kugara uye ugari nekudyara muKupro, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muCyprus, Citizenship nehurongwa hwekudyara muCyprus, Citizenship nehurongwa hwekudyara muCyprus, wechipiri pasipoti muCyprus, yechipiri pasipoti zvirongwa muCyprus , chirongwa chechipiri chepasipoti muCyprus, pasipoti yepiri yepiri muCyprus, pekugara uye pasipoti yechipiri kuCyprus, repasipoti repasipoti repasi muCyprus, pasipoti yepiri nekudyara muCyprus, yechipiri ugari pasipoti muCyprus, yechipiri pasipoti chirongwa muCyprus, chechipiri pasipoti zvirongwa muCyprus , visa yegoridhe muKupro, vhiza dzegoridhe muCyprus, zvirongwa zvendarama zve visa muCyprus, vhiza yegoridhe vhiza muCyprus, yechipiri vhiza vhiza muCyprus, chechipiri vhiza yegoridhe visa muCyprus, vhiza mbiri yegoridhe visa muCyprus, ugari uye vhiza yegoridhe muCyprus, ugari uye vhiza yendarama muCyprus, mugari vhiza mugari muCyprus, dhiza vhiza scheme muCyprus, zvirongwa zvegoridhe vhiza muCyprus.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muCyprus nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muCyprus ye Residence nekudyara: EUR 300,000 (visa yegoridhe)
Nhanganyaya Cyprus uye Residence neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveCyprus
Cyprus iri kuwedzera kuwanda pakati pevashanyi vemberi uye online bhizinesi yekuona network. Chitsuwa chiri kumabvazuva kweMediterranean Ocean, Kupro haisi nzvimbo yekushanya chete, asizve inzvimbo yakanaka yekumisikidza hwaro hwemuoni webhizinesi.
Nyika yeEuropean Union, ongororo yakaderera, chimiro chesangano rakasarudzika, masisitimu ari kusimukira uye mota huru inosangana kune yasara yeEuropean uye Middle East, Kupro zvechokwadi inoratidzira huwandu hukuru hwemabhokisi ekutarisa evazhinji vanamuzvinabhizimusi. Kune akawanda anoshamisa emahombekombe pamusoro pechitsuwa ichi, uye zviri pasina mubvunzo chimwe cheangu nhamba imwe chete zvidimbu zvehupenyu hweCypriot. Kutanga muna 2019, Kupro inopa makumi mana nemasere-haired mahombekombe egungwa mazhinji acho achive akakodzera nzvimbo dzemvura, semuenzaniso, kuyerera kwechikepe, kukwikwidza bhodhi, uye kusvetuka kwemvura.
Pamusoro pezvo, kumadokero kwechitsuwa mudunhu rePaphos, kazhinji kune kuzvimba kwekumadokero uko kunobatsira pakufamba. Kune mamwezve akasununguka ekuzaruka kuvhurika neCyprus inopa akawanda akakosha pombi dzenzvimbo, semuenzaniso, iyo Amphorae Mapako uye iyo MS Zenobia wreckage. Sezvo Cyprus yakakosha kuEuropean Union, nyika ine kupinda mahara kumusika mumwe chete uye mubatanidzwa wetsika. Izvi zvinoreva kuti chitsuwa ichi chinopa kodzero dzakafanana seimwe nzvimbo yeEuropean nyika.
Pamusoro pezvo, nemari yeSaipurosi iri iyo Euro, kune mamwe masuo akavhurika ekutengeserana uye akakosha kusanganisirwa kwemari yemari. Hupenyu hweCypriot hwakanyanya Mediterranean, uye mamiriro ekunze futi! Mugore rese gore, iyo yekutsamwa mamiriro ekunze ndechimwe chinhu chinokwezva chechitsuwa.
Cyprus ine imwe yemazhizha anopisa uye echando mumhepo muMediterranean. Zvese zvinhu zvinofungidzirwa, tembiricha yegore iri iri pakati pe25 ° C masikati uye 15 ° C husiku.
Mumwedzi yese yekupedzisira yechirimo, kunyanya Chikunguru naAugust, chitsuwa chinopisa! Nenguva yechando yekumberi kwemvura ye30 ° C masikati uye 23 ° C manheru. Zvinodhura here kugara muCyprus?
Kwete pasi pechero mamiriro.
Kazhinji, avhareji mutengo wezvekutanga zvinhu muCyprus ndeyechokwadi yakaderera ichienzaniswa nedzimwe nyika dzeEurope. Nekuda kwekuve chitsuwa uye chinodiwa chekupinza, pane zvinhu zvishoma izvo zvinodhura, semuenzaniso, mota. Saka, izvi zvinofanirwa kuverengerwa mukushandisa kwako kana uchifunga zvekuenda kuCyprus.
Mari yakasarudzika yemabiko maviri pachitsuwa inogona kukudzikisira uchitenderedza 25-30 euros. Pane mukana wekuti iwe uri aficionado yechiGreek neMiddle East chikafu, iwe uchawana akawanda akajairwa tavernas ayo anopa hukuru mhando chikafu pane zvine musoro mutengo.
Kubva kuExpatistan, Nicosia neLimassol ndiwo madhorobha maviri anodhura pachitsuwa ichi. Zvisinei neizvi, mhedzisiro inoratidza kuti avhareji mutengo wezvinhu zvekutanga muNicosia wakakomberedza 28% isingadhuri pane kuStockholm.
Kubva pane zvandakaona, vekuCyprus vanoziva uye vanogara vachitaura Chirungu chavanoziva. Pataigara kuCyprus, ndaikurudzira kusanganisa nevanhu vepedyo kuti ndisangane nemararamiro eCypriot zvizere! Mitero yemitero inozivikanwa kubvumira vemunyika mukana wekubhadhara zvishoma-zvishoma mari inopesana nezvavaizoita mumarudzi avo emuno.
Zvakare, Kupro inogona kuve ine mukana wakasarudzika uchisiyaniswa nenyika dzakasiyana zvine chekuita neyakajairwa muyedzo.
Kuchinja kuita nzvimbo yepakati yebhizinesi neakaundi kwakagara kuri kudikanwa kweCyprus, kunyanya kubva pakagovaniswa nyika muna 1974. Rudzi rwacho rwunotsamira nesimba pakushambadzira kwayo indasitiri; zvisinei, iyo nyika inopa inokwezva yemubhadharo kukurudzira kune vanoona bhizinesi kubva kutenderera pasirese.
Pakave nekugadziridzwa kwakawanda muCypriot basa dhizaini mukati menguva refu. Chero zvazviri, kuchine zvakawanda zvakanakira kubhadhariswa kunyoreswa murudzi.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeCyprus
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muCyprus
EUR 300,000 (visa yegoridhe)
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Saipurasi
Kugara nekudyara kweCyprus
Chitupa chechisikigo ('Citizenship') kana mvumo yekugara zvachose, zvinoenderana nechirongwa,
Kutora nguva yekugara nekudyara kweCyprus
Inofanirwa kuve nemvumo yekuenda kune imwe nyika kwemwedzi mitanhatu uye inofanira kunge iine mutengo wekutenga we € 6 yekugara
Makore manomwe ekugara zviri pamutemo muCyprus
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veKupro
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweCyprus
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweCyprus
Cyprus ine nzvimbo huru yenzvimbo. Iyo ine inodhura kwazvo kugara muEuropean Union. Iko mukana wekubvumidzwa wakanaka kwazvo munyika. Mushure mekugara mugari weKupro iwe unenge uine mukana kune ese mikana iyo nyika yaunofanira kukupa iwe kusanganisira yakakwira nhanho yedzidzo. Cyprus ichava chikamu cheSchengen zone mune ramangwana riri pedyo, iro rinopa mukana wekufamba nekugara kwese muEurope. Iko kuvapo kwemuviri munyika yemunhu ane chigaro chekugara hazvidiwe. Iwe unongodiwa chete kushanyira nyika panguva yekuita basa.
Mhuri inopinda muCyprus
Iwo mabhenefiti echirongwa chekugara kweCyprus anoshandiswawo kunhengo dzemhuri.
Kugara nehurongwa hwekudyara muKupro insite
Iyo nguva yekugadzirisa chirongwa ingori chete 2 mwedzi. Mushure mekutenga chivakwa muCyprus, haudiwe kugara munyika uchingoshanyira Kupro makore ese maviri.
Kuti uwane pekugara nekudyara, iwe unofanirwa kuisa mari muCyprus kweinenge EUR 300,000. Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kuita dhipoziti yebhangi yeEUR 30,000. Zvakare, iwe unofanirwa kupa mari yegore negore kubva kunze kwenyika kushoma kweEUR 30,000 pavakaroora. Pamusoro pezvo, EUR 5,000 yemwana mumwe nemumwe uye EUR 8,000 yemubereki mumwe nemumwe.
Iwe uchafanirwa kuuya kuCyprus kamwe kuitira kuti upe iyo biometric data inodiwa. Unogona kushanyira nyika panguva yekunyorera kana mushure mekubvumidzwa.
Mari inodiwa kuCyprus
Vanyoreri vanodikanwa kutenga hofisi nyowani yeashoma eEUR 300,000 muCyprus. Chibvumirano chekutengesa uye humbowo hwekuti iwe wakachinjisa kanokwana EUR 200,000 yemutengo weaseti inofanira kuendeswa pamwe nechikumbiro. Iko kune mukana wekutenga iyo nzvimbo nekambani. Nekudaro, iye anenge achinyorera kana wake / mukadzi wake anofanira kunge ari iye oga mugovani wekambani.
Zvakare, iye anonyorera anofanira kuita bhangi dhipoziti yeEUR 30,000 Cyprus. Iyo dhipoziti inofanirwa kusiiwa mubhangi kwemakore matatu. Mushure memakore matatu. iyo yose mari ichadzoserwa kumunhu.
Mari yehurumende yekutumirwa kwemvumo yekugara iri € 500 pavanhu vaviri. Iko kune yekuwedzera mubhadharo weEUR 70 pamumwe neumwe akawedzera anoenderana. Iko kune mubhadharo weEUR 50 pamunhu pane biometric data.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweCyprus
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuCyprus uye Residency ne Investment Lawyers zveKupro inopa vatengi uye mhuri dzavo muCyprus nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuCyprus, kugara nekudyara kubva kuCyprus uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira kugari nekudyara kubva kuCyprus kana Golden Visa kubva kuCyprus kana ugari nekudyara kubva kuCyprus kana pasipoti yepiri, tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuCyprus, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Cyprus kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muCyprus uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari uye zvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuCyprus nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari veCyprus:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara zveCyprus, kuburikidza nezvatinokwanisa mari yekudyara uye yekufambisa mutemo zveCyprus, inokwanisika investment immigration solicitors kuCyprus, inokwanisika Residency nevarairidzi vanopa mazano kuCyprus, inokwanisika Residency nemaInvestment magweta eCyprus uye inodhura yekufambisa yekufambisa femu yeCyprus
Kugara nekudyara kubva kuCyprus kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muCyprus kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuCyprus kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuCyprus kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuCyprus kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuCyprus.
Goridhe visa zvirongwa muCyprus kuenda ku37 Nyika.
Ugari nezvirongwa zvekudyara kubva kuCyprus kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuCyprus kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuCyprus kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweCyprus kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muCyprus nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muCyprus, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kuCyprus. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muCyprus vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muCyprus, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa real estate dzimba dzekugara zvirongwa zveCyprus nemari in real estate muCyprus
Unoda kuziva - Kuppera Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuCyprus kuchapa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuCyprus. Yedu akajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuCyprus inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuCyprus kana kuenda kuCyprus, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweCyprus kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeCyprus uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuCyprus, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuCyprus isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuCyprus. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kuCyprus uye goridhe vhiza inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kuCyprus zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveCyprus.
Kamwe kana kunyorera kwako kweKugara nekudyara kweCyprus kuchinge kwatenderwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemasevhisi ekudyara muCyprus kune vakataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muCyprus:
Residency nebasa rekudyara kuCyprus hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuCyprus.
Residency nezvirongwa zvekudyara kuCyprus hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muCyprus kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuCyprus.
Residency nekutsvaga kwekudyara kuCyprus hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko muCyprus.
Residency nerutsigiro rwekudyara zveKupro haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muCyprus.
Residency nebasa rekudyara kuCyprus haisi yemabhizimusi anobata nezvombo zvine njodzi kana zvine njodzi zvebayoloji kana zvombo zvenyukireya muCyprus.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweCyprus haruwanikwe kune vanhu veCyprus vanoita mukutengesa, kuchengetedza muCyprus, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara zveKupro haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa zveKupro hadzisi dzezvitendero uye masangano avo muCyprus.
Residency nebasa rekudyara mu Saipurasi haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muCyprus.
Kugara Kwedu magweta muCyprus haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muKupro.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veCyprus neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba chero kupi zvako kubva kuzviremera muCyprus zvekubvumidzwa kunyorera. Residency nekudyara muCyprus.
Kugara nekudyara muCyprus nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muCyprus yekudyara, yekupinda uye yekuronga zvivakwa muCyprus.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa neCyprus, isu tinogadzira mhinduro dzakanakisa
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuCyprus inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheCyprus.
Takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuCyprus vachitsigira vatengi uye mhuri dzavo kuCyprus.
Ruzivo Rwokugara nekudyara kwekukumbira kweCyprus nevamiriri vepamutemo kuCyprus vachipa rutsigiro kune vatengi.
Isu tine vakanyanya kukumbira uye vamiririri veCyprus kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuCyprus uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuCyprus
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Cyprus, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuCyprus kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuCyprus
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweCyprus ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veCyprus, isu tinokwanisa kupa zvirinani masevhisi nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweKupro uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza zveKupro
Maitiro Ekubvumidza Basa kuCyprus
Kwekugara kwenguva pfupi muCyprus
Permanent Residence muCyprus
Embassies uye Consulates eCyprus
Kugara neInvestment muCyprus uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muCyprus nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa
Kana iwe uri kuronga kutamira pamwe nemhuri yako kuCyprus nekudyara, isu semumwe wako kuCyprus, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye nguva yaungade kuCyprus nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuCyprus, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muCyprus, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eCyprus vachitigadzira shopu imwechete yekuCyprus nenyika dze106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye mabhizimusi kuCyprus mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kuCyprus nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muKupro nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muCyprus kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muCyprus inodhura nesu.)
Akaundi yeBhangi muKupro
Chero ani investor anotamira kuCyprus angazoda account yako yebhangi muCyprus uye account yebhangi yekambani muCyprus, tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muCyprus
Kana iwe uchida kubvunza muCyprus, ye mhinduro dzemadhijitari muCyprus senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muCyprus kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Cyprus kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muCyprus kutanga pakarepo muKupro.
HR Services muCyprus
Our kambani yevashandi muCyprus inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post mabasa muKupro vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeKupro
Bhizinesi foni masystem eCyprus pamwe ne chaiwo manhamba eCyprus Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muCyprus
Accounting, kushingairira kwakakodzera muCyprus uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muCyprus
Setup bhizinesi muCyprus
Mushure mekugara zvakare nekudyara kuCyprus, setup bhizinesi mu Saipurasi.
Isu tinopa pazasi ataurwa IT mhinduro muCyprus
Kugadzira Webhu muCyprus
Ecommerce Kuvandudza muCyprus
Webhu kuvandudza muCyprus
Kuvandudza kweBlockchain muCyprus
App Kubudirira muCyprus
Software Kubudirira muCyprus
Magweta eResidency neInvestment muCyprus
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuCyprus uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuCyprus, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuCyprus ine vamiririri vekunze vanoenda kuCyprus, tine mukurumbira wekupa yakanakisa vatengi sevhisi yeCyprus ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeCyprus vanhu nemhuri dzavo. Kugara kwedu neboka rekudyara kuCyprus kunopa mhinduro dzakagadziriswa dzekubudirira kweKuteja.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuCyprus, pane yako mvumo yekugara muCyprus inogamuchirwa.
Simba regweta reCyprus rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muCyprus. Kana iwe uri muCyprus kana kuronga kushanyira Cyprus, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweCyprus iri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeCyprus. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weCyprus.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muCyprus
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muCyprus?
Kugara nekudyara kuCyprus, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweCyprus kuburikidza nekudyara muhupfumi hweCyprus kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kugara kwekugara nekudyara kuCyprus, kugara pamwe nehurongwa hwekudyara kuCyprus inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuCyprus, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muCyprus, kugarisana kwakanakisa nemagweta ekudyara muCyprus uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vekudyara kuCyprus, vanoshanda pekugara zvakanakisa nevamiririri vezvekudyara muCyprus, uye akanakisa mafemu ekushambadzira. muKupro.
Kugara nemabasa ekudyara kuCyprus | Kugara nevamiriri vemari muCyprus | Kugara nemagweta eInvestment muCyprus | Kugara nemagweta ekudyara muCyprus | Kugara nevekudyara varidzi kuCyprus
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muCyprus?
Ugari nekudyara kuCyprus, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweCyprus kuburikidza nekudyara muhupfumi hweCyprus kuburikidza nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muCyprus. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuCyprus, ugari nehurongwa hwekudyara kuCyprus inotsigirwa nehugari hwemo nekudyara mabasa kuCyprus, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muCyprus, ugari hwakanakisisa nemagweta ezvekudyara muCyprus uye ugari hwakanakisa nevanoona nezvekurima kuCyprus, vachishanda kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muCyprus, uye akanakisa mafemu ekushambadzira ekupinda muCyprus
Affordable Investor immigration services kuCyprus | Affordable immigration solicitors muCyprus | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muCyprus | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muCyprus | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda kuCyprus | Affordable immigration law firms kuCyprus
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muCyprus?
Yechipiri pasipoti muCyprus, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weKupro kuburikidza nekudyara muhupfumi hweCyprus kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuCyprus, yechipiri pasipoti chirongwa cheCyprus inotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eCyprus, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirese muCyprus, magweta epasipoti akanakisa muCyprus uye akanakisa echipiri mapasipoti macomputer eCyprus, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muCyprus, uye akanakisa mafemu ekushambadzira ekupinda muCyprus.
Chechipiri pasipoti services kuCyprus | Chechipiri pasipoti vamiririri muCyprus | Yechipiri mapasipoti magweta muCyprus | Yechipiri mapasipoti magweta muCyprus | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuCyprus
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muCyprus?
Ndarama vhiza muCyprus, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara yeKupro kuburikidza nekudyara muhupfumi hweCyprus kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuCyprus, chirongwa chegoridhe vhiza cheCyprus inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eKupro, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muCyprus, akanakisa egoridhe vhiza magweta muCyprus uye akanakisa egoridhe vhiza mazano eCyprus, vanoshanda kune akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muCyprus, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa mafemu muCyprus.
Ndarama vhiza masevhisi eCyprus | Ndarama vhiza vamiririri muCyprus | Magoridhe vhiza magweta muCyprus | Magoridhe vhiza magweta muCyprus | Goridhe vhiza vanopa mazano kuCyprus
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muCyprus?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muCyprus iEUR 300,000 (yegoridhe visa).
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuCyprus yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muCyprus nevamiriri muCyprus vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muCyprus.
Kugara nekudyara kuCyprus kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuCyprus uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuCyprus ndeyevanhu vane mambure akakosha, isu tinobhadharisa chete reji yemubhadharo weResidency neInvestment kuCyprus, tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Residency nemaInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuCyprus kana investor visa kuCyprus?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuCyprus kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuNepal, Kugara nekudyara kuCyprus kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuCyprus kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance zveKupro
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuCyprus
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeCyprus
Kugadziriswazve kweMutero weRhafu rezinesi
www.investcyprus.org.cy Kupro Investment Inosimudzira Agency:
Ministry of Justice uye Ruzhinji Order
Ministry of Transport, Kukurukurirana uye Mabasa
Ministry of Energy, Commerce neindasitiri
www.aboutcyprus.org.cy General information nezve Kupro:
Ministry of Education uye Tsika (muchiGreek chete)
www.cyprusairports.com.cy Kuprose International Airports (Larnaka and Pafos):
Nhare mbozha yepamusoro-Pamusoro
Kubatana kweCyprus Nharaunda
Ministry of Agriculture, Rural Development uye Nzvimbo
Zvikoro neMayunivhesiti Tuition Anobhadhara Mari
Mipiro paInternet Kubhadhara System yeMagariro Inishuwarenzi Services
Mubatanidzwa weCyprus Mataundi
Ministry of Labour, Welfare uye Social Insurance
Link to Dhipatimendi Rekupinda muCyprus , Inotarisira kuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muCyprus